I-Phytotherapy: inkcazo, iingenelo kunye nokungonakali
Lo ngumbuzo onokuphikisana - indlela enempumelelo ngayo imithi yamachiza nokuba ingaba yindlela enye yokonyango. Kodwa into enye icacile - olu unyango lubonakala lulula, ngaphandle kokubangela utshintsho olunobungozi emzimbeni. Kwiimeko ezininzi, ukuba uhlolisisa kakuhle umphumo wempendulo ethile kwaye uyifumene ngokuchanekileyo, kunokukhokelela ekuzaliseni kuphela unyango, kodwa ukuqinisa umzimba ngokubanzi. Ngoko, i-phytotherapy: inkcazo, iingenelo kunye nokungonakali yintetho yengxoxo namhlanje.
Ngaphandle kokungathandabuzeki, eyona nto ibaluleke kakhulu kumntu yimpilo yakhe, exhomekeka kakhulu kwiindlela zobomi kunye nolwalamano noluntu. Xa kuphakama iingxaki, abaninzi bethu bafuna ezintsha, ezisebenzayo kunye nezidakamizwa "ezidumile", ukulibala malunga namayeza asekudala. Kodwa emva kwewaka leminyaka, umntu waphathwa (kwaye waphathwa ngempumelelo) kuphela ngoncedo lweetrob.
I-Phytotherapy yonyango oluthile olusekelwe kwiipropathi zokuphilisa izityalo, ezilungele ukunyamezela kwaye zineempembelelo ezimbalwa ezibi. Okwangoku, malunga neentlobo ezingama-500,000 zezityalo ziyaziwa, kodwa kuphela malunga ne-5% yazo zibhekwa njengezinto eziphathekayo ze-pharmacologically. Oku kubonisa into eyodwa kuphela - kukho ininzi enkulu yeentlobo ezingakakhange zifundwe ngamagqirha, kwaye kukho amathuba okufumanisa iipropathi ezintsha zonyango zezityalo.
E-Rashiya, malunga nama-650 izityalo zonyango zisetyenziselwa, iintlobo ezingama-300 ziqokelelwa ngonyaka. Ngenxa yeemeko ezahlukeneyo zemozulu kunye nomhlaba, isitokisi sendalo semifuno siyahluke. Oku kuxhomekeke kwimithombo yokutya yezityalo eziqulethe ipesenti ephezulu zezinto eziphilayo ezisebenzayo. Zizityebi kwiimveliso zamakhemikhali ezahlukeneyo, ezifana ne-alkaloids, i-glycosides, i-saponins, i-polysaccharides, i-tanins, i-flavonoids, i-coumarins, ii-oyile ezibalulekileyo, ii-vithamines kunye nezinto ezilandelwayo.
"Amachiza ubugcisa bokusebenzisa amandla okuphulukisa endalo"
Le ngcamango yaboniswa nguHippocrates, kwaye sele ihlolwe rhoqo ngeenkulungwane. Ngokomzekelo, kwiseAsiriya yakudala kwakukho izikolo ezizodwa zokukhula kwezityalo zonyango, kunye nepapyri yasendulo yaseYiputa ichaza impembelelo enomzimba kwizityalo ezininzi, ezifana ne-mint, plantain kunye ne-poppy.
Ngesihlandlo sokuqala, ugqirha ongumRoma, uGalen Claudius, wacetyiswa ukuba asebenzise izithako kunye nezicatshulwa ezitshalweni ngeenjongo zokwelapha. U-Avicenna, naye, waqulunqa ikhathalogu eyenzelwe iinjongo zonyango, echaza izityalo ezingaphezu kwe-900, ezininzi zazo namhlanje zibhekwa ngokusemthethweni njengeyeza. Kwiminyaka emininzi kamva, uhlobo lwe-phytotherapy lwafika kumaThracians naseSlav, aphinde aqalise ukubaluleka kakhulu kwiinkqubo zempembelelo nokusebenza kwezityalo emzimbeni womntu. I-Phytotherapy iya kuba yinto ebaluleke kakhulu yezinto zemveli zonyango.
Namhlanje (ngokwe-WHO) malunga nama-80% abantu basebenzisa iziyobisi zemvelaphi yemvelo kwinkqubo yokunyamekela. Le nyaniso ayikho enye into ethethayo ekuthandeni i-phytotherapy - abantu baye bafunda iingenelo kunye nokungonakali kweli ndlela ixesha elide kwaye baphumelele ngempumelelo. Ikwabonelela ngamathuba amaninzi ekunciphiseni iinkampani zokuxuba imveliso ukuba zisebenzise izityalo zonyango ukuze kuhlanganiswe izithako ezisebenzayo kunye namayeza kwiindawo ezahlukeneyo zonyango.
Baphathwa njani nge-phytotherapy?
Zonke izityalo ezinonyango ezingenayo into enobuthi kunye nezobutyhefu zingasetyenziselwa ukulungiselela amaqulunqa okusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle ekhaya. Indlela yokulungiselela ngokuqhelekileyo kuxhomekeke ekuvelweni kweekhemikhali zezinto ezisebenzayo, ukuzululiswa kwazo kwiimveliso zamanzi (umzekelo, kumanzi okanye kotywala), njengezityalo zezityalo (iintyatyambo, amaqabunga, iingcambu, imbewu, njl).
Eyona nto isetyenziswa ngokubanzi kumachiza omntu, iincutshe, i-infusions kunye ne-decoctions. Imveliso nganye inezinzuzo kunye nokungahleleki. Zilungiselelwe ukusuka kumaqabunga, iintyatyambo okanye ezinye izitho zityalo, apho kulula ukukhupha izinto ezisebenzayo ezilungiselelwe ngendlela yokunyuswa. Okukuphela kweevini, ezilungiselelwe njenge-decoction, kunye nazo zonke iindawo ezinzima zezityalo.
Ukulungelelaniswa kwiitrob, ezifakwe kwi-porcelain okanye kwisitya seglasi kunye nokuthunyelwa kwindleko ephakanyisiweyo yamanzi. Kungcono ukuba amanzi aneqondo lokushisa elingenakuphakama kuneli gumbi. Isitya sivaliwe ngesibhambathiso kwaye sishushu kwindawo yokubilisa yamanzi abilayo imizuzu engama-15, ihlala ivuselela. Emva kokususa ekuhlambeleleni kwamanzi, kufuneka uvumele ukuba umele malunga nemizuzu engama-45, ngoko ukufakelwa kwamanzi kwongezwa ngamanzi ngobungakanani obunqunyiwe.
Ezi zicatshulwa ezifunyenwe emva kokufudumala kwezityalo kwindawo yokuhlambela ngamanzi. Iitrobhu zifakwe kwisitya se-porcelain kwaye zityhala kunye nenani elinconywayo lamanzi abilisiwe, lichithwe imizuzu engama-30, ivuselela rhoqo. Emva kokuba isilwanyana sehlile kwiqondo lokushisa kwegumbi, lifakwe kwaye liziswa kwivolisi echanekileyo. Imfuno eziphambili zokuvula kunye nokunyuswa kufuneka zilungele imihla ngemihla, zifanele zigcinwe kwindawo emnyama nepholile, kodwa zingapheli iintsuku ezi-3. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukunyonywa kunye nokuhlaziywa kwezixhobo zezityalo kunomphumo onamandla kwaye kusetyenziswa kuphela umyalelo.
Zikhiqizwa ngokufaka utywala obunxilisayo, amanzi kunye ne-ether ezicatshulweyo zokutyala izinto eziyimveliso kunye nemveliso yokugqibela ifumaneka ngaphandle kokufudumala. Ngokuqhelekileyo, ukwenzela ukuba uzilungiselele, i-70% yotywala iyadingeka. Isixhobo sityalo sifakwa kwisitya esifanelekileyo kwaye sathelwa ngotywala, samanzi abilayo kwaye sishiye iintsuku ezi-7. Emva kweveki, i-tincture iyicwecwe kwaye ithululelwe kwisitya sokuhlala. I-Tincture ingasetyenziselwa ixesha elide, ayiyi kuhlahloka kwaye ayilahlekelwa iipropati zayo. Ukongezelela, i-tincture ikwandisa inkcazo ebonakalayo yesondlo sokutya.
Ezi zicatshulwa kwizinto eziphathekayo. Ngokuxhomekeke kokulandelelaniswa kokulungiswa, zinokuba zi-liquid, ezinqamlekileyo okanye ezinombane kunye nomxholo wokunyusa ongaphezulu kwama-5%. Akukhuthazwa ukulungiselela ikhaya.
Ingxenye egcotyiweyo yotshani idluliselwa encinci ngamanzi afudumele (30 °). Isetyenziswe ngaphandle ngefom ye-compresses. Kuphela nje ukusasaza isityalo esikhulu ukulinganisa nokuyibeka kwindawo ephosakeleyo.
Olu hlobo lonyango luyinxalenye ebalulekileyo yenkcubeko yezizwe ezininzi kwaye ihlala kwindawo ebalulekileyo ebomini babantu. Kule nkalo, ukulungiswa kwamachiza asebenzayo ngakumbi kunyango nokukhusela izifo ezisekelwe kwizityalo zonyango kubaluleke kakhulu. Kwizenzo zehlabathi, malunga nama-40% amayeza atholakala kwi-chemical and pharmaceutical industry yilungiselelwe kwizinto ezivelisiweyo zezityalo. Ngokusekelwe kwizityalo zonyango, ukuvelisa malunga ne-80% yezidakamizwa ezifunekayo ukunyanga izifo zentliziyo, i-pulmonary and stastrointestinal diseases.
Izityalo zonyango zisetyenziswe njengezinto eziqingqiweyo zokuzihlukanisa kwamakhemikhali, ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zokwenza, ihlukaniswe ngama-corticosteroids, ama-hormone nabanye.
Uncedo ngokukhethekileyo kukusetyenziswa kwamacube kunye namalungiselelo avela kubo, ukwenzela unyango lwezifo ezingapheliyo ezifuna ukutyhila ixesha elide. Ukunyamezeleka okulungileyo kunye nobutyebi obuphantsi kwabo baninzi bavumela unyango lwangexesha elide xa bengenalo izinto ezinokuba zilutha kwaye zibangele umlutha.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukwamkelwa okungalawulwayo, okungaqondakaliyo nokungalunganga kwamachiza kunye nezongezo zemifuno kwezinye iimeko kunokukhokelela kwimiphumo emibi emzimbeni. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwabasetyhini abakhulelweyo, abantwana abancinci kunye nabantu abanomdla. Kwakhona, i-phytotherapy ayikhuselekile kulabo abaye babonisa ukunyamezela kwezinye izinto. Kwiimeko ezinjalo, iingcebiso zengcali ziyimfuneko.
I-trophic ulcer yonyango lomlenze ophantsi weyeza lomntu
Iindlela zonyango zonyango lwe-radiculitis
Martini kunye nebhekoni
Indlela yokuyiqonda, yiyiphi into elandelelanayo eyenziwa ngumzimba?
Yintoni enokuyenza xa umntwana enesifo se-atopic dermatitis
Ubomi bomntu kaLyudmila Gurchenko
Isaladi yeeswele kunye noshizi ngegromegranate
IHoroscope: ukubikezelwa kwe-scorpion yonyaka we-tiger
Iingcamango zokuhlamba phantsi, yintoni le?